Uhambo oluya ezintabeni ezinamadwala | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Ezokuvakasha, United States
Azidumile njenge-Andes noma i-Alps, futhi azinhle kangako, kepha ngokuqinisekile izwe lebhayisikobho ne-TV libenze baduma. Ngikhuluma nge Izintaba Ezinamadwala okuku- I-America esenyakatho.
I-Las eziNtabeni ZaseRocky Bangabase-United States nabaseCanada futhi bayindawo yokuqwala izintaba ethandwa kakhulu kule ndawo yomhlaba. Namuhla bayingxenye ye- I-Rocky Mountains National Park, esifundazweni saseColorado.
1 Izintaba Ezinamadwala
2 I-Rocky Mountain National Park
Kuyinto a uhlelo lwezintaba egijima ngokufana nogu olusentshonalanga futhi ine- INtaba i-Elbert iyindawo ephakeme kakhulu, enamamitha angu-4401 XNUMX ukuphakamara. Zakhiwa eminyakeni eyizigidi eyedlule, ithintekile ukuqhwaqha kwe-Quaternary Era nangokuguguleka komkhathi nomsebenzi wentaba-mlilo.
Ngaphambi kokufika kwamakholoni waseYurophu babekhona futhi kusenjalo ikhaya labantu baseMelika baseMelikakufana ne- i-cheyenne, the Apache noma i yebox, ukubala nje ezimbalwa. Lapha bazingela izinyathi namammoth. Ukufika kwabahloli bamazwe baseYurophu bephethe izikhali zabo, izilwane ezinjengamahhashi kanye nezifo ezahlukahlukene ezithathelwanayo, kwaguqula kakhulu iqiniso lalaba bantu.
Izintaba zeRocky zacwaningisiswa ngokujulile ngokwesayensi phakathi nasekupheleni kwekhulu le-XNUMX nasekuqaleni kwekhulu le-XNUMX. Izikhumba namaminerali, ikakhulukazi igolide, kwawagqugquzela, futhi kwabalwa okufanayo izindawo zokuhlala ezaqala ukwenzeka kusukela lapho.
I-Rocky Mountain National Park
Le ndawo evikelwe yasungulwa ngo-1915 futhi inesandiso se- Amakhilomitha skwele. Kukhona I ingxenye esempumalanga nengxenye esentshonalanga futhi zombili izingxenye zehlukile. Ngenkathi eyokuqala yomile inezinguzunga zeqhwa eziningi, lena yokugcina kunemvula futhi kunomswakama, okuvumele ukukhula kwamahlathi aminyene kakhulu.
Ngaphakathi kwepaki kuneziqongo ezingaba ngama-60 ngaphezulu kwamamitha ama-3.700 ukuphakama nemizimba yamanzi eyi-150 ngosayizi ohlukile. Imikhakha ephansi kakhulu ekuphakameni inakho izimfunda namahlathi ngezihlahla zikaphayini nezimfezi, kepha njengoba sikhuphuka ihlathi elingaphansi komhlaba Futhi uma sesivele sikhuluma ngamamitha angaphezu kwama-3500 ukuphakama, khona-ke azikho izihlahla kanye ne- i-alpine meadow.
Isikhathi esihle sokuvakashela leli paki kusehlobo, phakathi kukaJulayi no-Agasti, njengoba cishe kungama-30 ºC, yize ubusuku busabanda. Likhithika phakathi kuka-Okthoba nokuphela kukaMeyi. Epaki vula amahora angama-24 ngosuku unyaka wonke, ngaphandle kwezinsuku ezithile ezikhethekile okufanele zihlolwe kuwebhusayithi, futhi kunezinhlobo ezahlukene zethikithi isivakashi:
Ukudlula kosuku olulodwa ngomuntu ngamunye: $ 1
Ukudlula kwezinsuku eziyi-7 umuntu ngamunye: $ 20
Kukhona namathikithi ezimoto ezinabantu abangaphansi kuka-16 noma zabantu abafika ngesithuthuthu. I- Isikhungo Sabavakashi Se-Alpine Yindawo enhle yokuqala, endaweni ephakeme kakhulu epaki ngamamitha ayi-3.595 ukuphakama, ngokubukwa okuhle kwezigodi zeqhwa neziqongo. Ngaphezu kwalokho, inikezela ngemininingwane eminingi ngale ndawo. Kukhona enye indawo efana naleyo, i- Isikhungo Sabavakashi Beaver Meadows lapho kukhonjiswa khona ifilimu yemizuzu engama-20 futhi kunemephu yesimo sendawo epaki, kanye nesitolo sezipho ne-WiFi yamahhala.
Esinye isikhungo sezivakashi yi- IDowntown Fall River futhi kukhona nendawo yomlando ebizwa ngeHolzwarth esibuyisela emuva eminyakeni yama-20s yekhulu elidlule, ukubona ukuthi abantu babephila kanjani ngaleso sikhathi. Izakhiwo lapha zivuliwe ehlobo, kepha ebusika ungazibona ungaphandle. I- Isikhungo Sabavakashi saseKawaneeche, enyakatho yeGrand Lake Village, inikezela ngamamephu, izimvume zokukhempa, kanye nemiboniso epaki. I- Isikhungo Sokutholwa KweMoraine Park KukuBear Lake Road futhi inikezela ngemibukiso yayo kanye nomkhondo wemvelo ohlinzeka ngemibono emihle yeMoraine Park.
Ngaphezu kwalezi zikhungo zezivakashi ezisatshalaliswe kuyo yonke ipaki, isihambi singalandela okwehlukile imizila ebabazekayo. Uma uthanda izintaba kukhona i- I-Trail Ridge Road, umgwaqo ogandayiwe ophakeme kakhulu ezweni, owela iMilner Pass. Kukhona futhi i- Umgwaqo u-Old Fall River, yomhlaba, uvuleke-ke ekuqaleni kukaJulayi kuze kube sekupheleni kukaSepthemba, ngoba unamajika amaningi.
Futhi kunezindawo eziningi zepikinikini namathuba amaningi we ukuhamba ngezinyawo, ukugibela ihhashi noma phuma ikamu futhi ngilale ngaphansi kwezinkanyezi. Isigodi saseKawuneeche siyindawo enhle yokuqwala izintaba futhi kulapho i- Indawo Yomlando waseHolzwarth noMzila weCoyote. Konke lokhu kuseceleni lasentshonalanga yepaki. Ngeshwa iningi lale mizila lonakaliswe yizikhukhula zango-2013 ngakho-ke yonke into kufanele ihlolwe kusengaphambili ezikhungweni zezivakashi kanye naku izingozi.
Ehlangothini olusempumalanga yepaki kukhona i- Indawo ye-Bear Lake, enezindawo eziningi ezinhle zepikinikini, imikhondo kanye namaphuzu we-vantage. Kukhona ibhasi lamahhala ehlobo nasezinyangeni zokuwa. Futhi nansi iLily Lake enokubukwa okuhle kweLongs Peak, indawo yokudoba echibini, nendlela elula emindenini.
Ngakho-ke ngokuyisisekelo iRocky Mountain National Park inikeza izinketho ze ukuhamba ngezinyawo, izinsuku zika epikinikini, ubusuku obugcwele izinkanyezi ku izindawo ezinhlanu zokukhempanoma okungabhukwa kuze kufike ezinyangeni eziyisithupha ngaphambi kwalokho, amakamu amagebhugebhu amaningi nawo ayavunyelwa, ukugibela emhlane we hhashi ezitebeleni ezimbili ezivulwe ngoMeyi nangaphandle kwepaki, uhambo lokudoba emachibini angama-50 nemifudlana eminingi, ukubukwa kwezinyoni nezilwane zasendle, izikhungo zezivakashi ezinemininingwane yokusebenza kwabantu kula mazwe nezinhlelo eziningi ezilawula izingozi noma umqaphi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » United States » Uhambo oluya eziNtabeni zaseRocky
Yini ongayibona eMycenae